कोरोना खोप लगाएपछि शरीरमा आउन सक्छन् यस्ता समस्या... - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
27 January, 2021 7:33 am
सरकारले हाम्रो देशमा कोरोना भााइरस संक्रमण सुरु भएको झण्डै एक बर्षमा त्यसविरुद्ध बुधबार खोप अभियान सुरु गर्दै छ । ढुक्क भएर खोप लगाउन सरकारी निकायका अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । यो अभियान बुधबार बिहान १० बजे सातै प्रदेशबाट सुरु गरिदैँ छ ।
‘खोप लगाएपछि कसैलाई कुनै असर देखिदैँन । कसै कसैलाई सामान्य असर देखा पर्न सक्छ । जीउ दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, अल्छी लाग्ने, कमजोरी महसुस हुन सक्छ । खोप लगाएको ठाउँमा दुख्न सक्छ । डाबर देखिन सक्छ । ती असर केही समयपछि आफैँ हराएर जाने हुन्छ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव एवं कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदिप ज्ञवालीले भने, कतिपय अवस्थामा यदाकदा औषधी पनि आवश्यक देखिन सक्छ । केही असर देखिए पनि आत्तिनु पर्दैन।’
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले बुधबार ६५ भन्दा बढी जिल्लामा एकसाथ खोप लगाउन थालिने बताए। मुलुकभर ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखी सातवटै प्रदेशमा खोप ढुवानी भइसकेको डा। गौतमले बताए। काठमाडौंमा सरकारी र निजी गरी ११ वटा ठूला अस्पतालमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।